Soomaaliya Oo Markii Ugu Horeysay Dhaqaale Ka Heshay Shidaalka | Hayaan News
Soomaaliya Oo Markii Ugu Horeysay Dhaqaale Ka Heshay Shidaalka
Muqdisho (Hayaannews)- Soomaaliya ayaa markii ugu horeesay muddo 30 sano ah dhaqaale ka heshay shidaalka iyo kheyraadka kale ee ku jira dalka.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo sanadihii dambe ku hawlaneyd sidii looga faa’ideysan lahaa kheyraadka dalkeeda oo dhawaan la filayo in la soo bandhigo xajmiga uu la egyahay qeybihii sahanka lagu sameeyay.
“Kadib dadaalo badan oo ay maxdaxda wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ka samayeen dib u soo celinta xidhiidhka shirkadaha ku leh xidhmooyin shidaal iyo kuwo kale oo maal gashi cusub ka samaysta Soomaaliya ayaa waxaa lagu guulaystay in lagu qanciyo shirkadahaas lagu leeyahay ijaarka xidhmooyinka ay haystaan”, sidaas waxaa sheegay wasiir ku xigeenka wasaaradda Batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal.
Waxaa uu inta raaciyay in heshiis ku saabsanaa bixinta ijaarka xidhmooyin Shidaal oo ay galeen wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo Shirkadaha Shell/Exxon Mobil bishii Juun ee Sanad kan, shirkadahaas na ay dowladda federaalka u shubeen lacag dhan 1.7 milyan oo doolar.
Wasiir ku xigeenka ayaa sidoo kale ka hadlay qaabka lacagahaas ay u qeybsan doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, maadaama ay hore ugu heshiiyeen qeybsiga kheyraadka Soomaaliya ee heshiiskii Baydhabo.
“Maamulka Lacagtan ayaa ku salaysnaan doona heshiiskii kheyraad wadaaaga ee ay kala saxeexdeen Dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada” ayuu shaaciyay wasiir Ku xigeenka batroolka iyo macdanta ee Dowladda Federaalka, Maxamud Cabdiqaadir Hilaal.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabduqaadir Hilaal ayaa xiligaasi sheegay in shirka uu ahaa mid wax ku ool ah ayna muhiimadiisu ahayd in aqoon ahaan iyo xirfad ahaanba la fahmo loona diyaar garoobo qaabka loo soo saarayo iyo nooca uu yahay shidaalka.
Maxamuud Cabduqaadir ayaa sidoo kale sheegay in laga gaashaamanayo in marka shidaalka la soo saaro aanu khatar ugu noqon dadka iyo bayaduba.
Bishii February ayaa magaalada London waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay arrimaha shidaalka Soomaaliya kaas oo uu ka qeyb galay wasiirka macdanta iyo betroolka ee Soomaaliya.
Balse Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa waxay shirkaasi London ku tilmaameen mid lagu”xaraashayay” kheyraadka Soomaaliya.
Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa beenisay warkaas waxa ayna sheegtay in shirkii London uu ahaa mid lagu soo bandhigayay macluumaadka sahmin shidaal oo Soomaaliya laga sameeyay.
Shidaalka oo la ogyahay in qiima sare uu ka joogo suuqyada caalamka, dalal badan na dhaqaale ahaan ay ku horumareen ayaa waxaa sidoo kale la ogsoon yahay in uu colaad iyo dhibaato horleh u horseeday dalal ay kamid yihiin labada Suudaan, Nigera iyo Ciraaq oo tusaale loo soo qaato dalalka ay dhiabaatada ugu badan kasoo gaadhay dhibaatooyinka laga dhaxlo kheyraadka dabiiciga oo aan si wanaagsan loo qeybsanin